Inona no tokony hataontsika raha maneno be ny vavonin'ny alika? | Tontolo alika
Ny rafi-pandevonan-kanina alika dia manomboka amin'ny vavany mandra-pahatongany ao amin'ny lava-bato, ary izy no miandraikitra ny fandevonan-kanina ny sakafo tsirairay, amin'ny fomba izay manararaotra ny ankamaroan'ny otrikaina ary nesorina ny fako.
Ary mba hahavitan'ity rafitra ity ny asany dia mila ny fanampian'ny sarakaty, ny aty ary koa ny gallbladder. Mandritra io fizotrany io dia ara-dalàna ny fitsofanan'ny tsinainao, fa mila mitandrina kosa ianao amin'ireo soritr'aretina hafa.
1 Inona no tsy maintsy hataontsika raha maneno ny vavonin'ny alika
2 Fa maninona no miantsoantso ny vavonin'ny alika?
2.1 Fa maninona ny vavonin'ny alikako no maneno sy mandoa?
2.2 Inona no hatao raha maneno ny vavoninao rehefa mihinana be loatra ianao?
2.3 Maneno ny vavonin'ny alikanay ary tsy nihinana izy, normal ve izany?
2.4 Ny vavonin'ny alika dia mafy be, inona no mitranga?
2.5 Maneno ny vavonin'ny alika ary mivalana izy, inona no mahazo azy?
2.6 Fa maninona no miantsoantso ny vavoniko yorkshire?
2.7 Fa maninona no mihetsiketsika ny vavonin'ny alika?
2.8 Maneno ny kiboko ary tsy hihinan-kanina izy, inona no mitranga?
3 Inona no hatao raha maneno ny vavonin'ny alika?
4 Inona no tsara ho an'ny vavonin-tsofina?
5 Mahazatra ny mamoaka ny tsinay rehefa mandevina?
6 Fikororohana kibo, aretina mampidi-doza
Inona no tsy maintsy hataontsika raha maneno ny vavonin'ny alika
Raha vantany vao manatanteraka ny asany mahazatra ity rafitra ity, manao fihetsehana sy feo miaraka amin'ny famokarana gazy. Matetika, ity dia asa atao ara-batana ary tsy voaomana, hany ka amin'ny fotoana sasany ihany dia afaka maheno mazava tsara isika fa maneno be ny vavonin'ny biby fiompintsika.
Raha toa miharihary loatra ireo feo tsinay ireo, Mila mametraka fepetra vitsivitsy ianao alohan'ny handehananao any amin'ny mpitsabo
Mitadiava porofon'ireo soritry ny sakafo mety ho nohanin'ny alika nefa tsy tsapanao akory.
Adiresy ireo soritr'aretina miaraka.
Raha maharitra na miharatsy izy ireo, mankanesa any amin'ny consultation vonjy maika.
Tsara koa ny misoroka ny tabataba amin'ny tsinay, miaraka amin'ny fisorohana sasany:
Tazomy ny fahazaran'ny sakafon'ny alika, amin'ny fotoana iray ihany sy ny anjaranao mitovy mba tsy harary ianao ary tsy ho noana.
Aza avela haharitra mandritra ny alika na olombelona ny sakafo, indrindra raha ho irery ianao mandritra ny fotoana lava.
Aza avela ho tratran'ny singa maloto na misy poizina.
Fa maninona no miantsoantso ny vavonin'ny alika?
Misy antony maromaro mety maneno ny vavoninao, toy ireto:
Satria noana ny alikanao: rehefa noana ny alika, toy ny amin'ny olombelona, ny tsinainao hitabataba.
Entona sy rivotra: ny hetsiky ny vavony sy ny tsinay dia miteraka entona, toy ny fihinanana rivotra rehefa mihinana haingana be ary tsy mitsako tsara. Ny rivotra kosa dia mamoaka ny feo.
Nihinana zavatra tsy tokony hohaninao ianao: raha mihinana zavatra tsy sakafo amin'ny fahasalamana tsara ianao na zavatra tsotra fotsiny na zavatra tsy mety ho fanjifana, mety miatrika olana malefaka amin'ny gastrointestinal ianao. Ny fihinanana zavatra tsy ao anaty sakafo ara-dalàna dia mahasosotra ny vavoninao ary noho izany antony izany dia haneno ny vavoninao.
Parasites na olana amin'ny tsinay: ny fisian'ny katsentsitra na zavatra vahiny ao anatin'ny tsinay, miteraka olana sy tabataba, torak'izany koa ny aretina amin'ny tsinay izay miteraka fikorontanan'ny vavony.
Amin'ny tranga tsy dia matetika loatra dia mety mifandray izy ireo pathologies mifandray amin'ny rafitra metabolika sy endocrine. Mba hialana amin'ny olana lehibe, ilaina ny mitondra azy any amin'ny vet.
Fa maninona ny vavonin'ny alikako no maneno sy mandoa?
Manan-danja ny fanindronana puppy satria miaro ny canine amin'ny aretina maro izy. Fantatsika amin'ny alalàn'ny fikoropahana ireto feo ireto, ary ny marimarina kokoa dia ny milaza fa ireo no feo vokatry ny fivezivezin'ny gazy ao amin'ny tsinay.
Amin'ny fotoana mety handrenesana ireo matetika na amin'ny haavo avo lenta ary miaraka amina soritr'aretina hafa, Manolo-kevitra ny hitondra ny alikantsika any amin'ny mpitsabo biby. Raha sendra mihetsiketsika ny vavonin'ny alikanay ary ankoatry ny mandoa izy dia mety noho ny antony maro.
Amin'ny ankapobeny io dia mety vokatry ny fikorontanan'ny gastrointestinal vokatry ny fihinanana sakafo vitsivitsy amin'ny toe-piainana ratsy na fako mivantana. Saingy amin'ny fomba mitovy amin'izany dia mety hiteraka aretina sasany, na koa amin'ny fisian'ny vatana vahiny.
Ny tsirairay amin'ireo antony ireo dia tompon'andraikitra amin'ny fisian'ny fivontosana sasany ao amin'ny rafi-pandevonan-kanina, izay mety hiteraka fandoavana. Ny alika dia mazàna mandoa mora foana, ka mahazatra ny sakaizantsika volony no manao azy indraindray nefa tsy mila taitaitra amin'izany.
Na izany aza, rehefa miaraka amin'y mikotrokotroka ireo mandoa ireo, tsy mijanona izy ireo na raha mahita soritr'aretina hafa izahay, tena zava-dehibe ny hitondrantsika ny alikanay any amin'ny mpitsabo biby, amin'ny fomba izay tompon'andraikitra manam-pahaizana amin'ny fandinihana ny alika sy ny famaritana hoe inona ny antony, mba manome fanafody.
Inona no hatao raha maneno ny vavoninao rehefa mihinana be loatra ianao?
Mety misy tranga, ary indrindra ny alika izay mihinana haingana dia haingana tebiteby ara-tsakafo, ny rafi-pandevonan-kanina dia mety hiteraka feo rehefa iharan'ny fihoaram-pefy ity, satria lanin'ny alika be ny sakafo.
Amin'ity toe-javatra ity dia mety ho hitantsika ny vavony be. Toy ny mahazatra, misy feo sy fivontosana mandritra ny adiny iray ary miandry fotsiny mandra-pitrangan'ny fandevonan-kanina.
Amin'izao fotoana izao dia mitranga izany, tsy maintsy misoroka ny fanomezana sakafo alika bebe kokoa isika, fa raha mahita soritr'aretina hafa isika na tsy mifanaraka amin'ny asany ny alika toy ny mahazatra azy ary mbola mitohy ny feon'ny vavony, dia tsy maintsy entintsika any amin'ny mpitsabo biby izany.
Maneno ny vavonin'ny alikanay ary tsy nihinana izy, normal ve izany?
Misy ny tranga rehefa maneno ny vavoniny satria foana ireo. Mahalana izany no mitranga, satria amin'izao fotoana izao dia mitandrina ny tompony fa ny alika dia manana ny sakafo ilaina.
Afaka maheno feo ao amin'ny vavonin'ny alikantsika isika, satria noho ny aretina dia efa ela izy no tsy nihinan-kanina intsony. Raha izany no izy, rehefa lasa ara-dalàna indray ny sakafo, hanjavona ny tabataba.
Ny vavonin'ny alika dia mafy be, inona no mitranga?
Rehefa io tabataba na gurgling io fotsiny dia, tsy misy soritr'aretina hafa toy ny fivalanana na ny fandoavana mety vokatry ny entona mivezivezy amin'ny alàlan'ny lalan-dra.
Ireo grunts ireo koa dia mety ho vokatry ny biby noana ary raha avy misakafo izy ireo dia azo antoka fa mandevona ny sakafo. Amin'ny tranga maro, lRehefa mihinana haingana dia haingana ny alika dia mitelina rivotra be dia be ary io koa dia miteraka feo tsinay.
Amin'ny tranga somary marefo kokoa, dia mety misy katsentsitra, zavatra vahiny na aretina mandevon-kanina ny biby.
Maneno ny vavonin'ny alika ary mivalana izy, inona no mahazo azy?
Raha voan'ny fivalanana koa ianao, angamba ny alikanao dia manana olana amin'ny gastrointestinal izany dia miteraka fahasosorana amin'ny vavony sy ny tsinay. Raha mitohy ny fivalanana ary tsy misotro na mihinana koa dia tokony hitondra azy mankany amin'ny consultation amin'ny spesialista ianao.
Fanombanana ara-pahasalamana sy fampiharana ny fanadinana, ho hitan'izy ireo koa ny niavian'ny olana sy ny vahaolana.
Fa maninona no miantsoantso ny vavoniko yorkshire?
Toy ny alika hafa rehetra, ny yorkshire mety hisy fiantraikany amin'ny sasany aretina mandevon-kanina mahatonga ireo tabataba ireo, toy ny entona, tsy mahakivy ary na dia noana aza. Raha tsy miaraka amina soritr'aretina marefo kokoa toy ny mandoa ireo feo ireo dia resaka mandinika fotsiny, mitady izay mety ho antony ary raha maharitra dia ento any amin'ny dokoteranao.
Fa maninona no mihetsiketsika ny vavonin'ny alika?
Rehefa misy tsy mahazo aina amin'ny kibo sy mahazo aina, ny alika dia miseho azy amin'ny fangovitanaNa dia mety hiteraka zavatra matotra kokoa aza izy ireo toy ny fivontosan'ny tsinay, izay miteraka fanaintainana lehibe ary miaraka am-pivalanana sy tsy fahazotoan-komana.
Maneno ny kiboko ary tsy hihinan-kanina izy, inona no mitranga?
Mety misy katsentsitra ilay alika, satria manamafy kely ny kibony io ary mahatonga azy ireo tsy hihinan-kanina intsony. ny vavony sy ny tsinay dia feno entona ary ireo tabataba ireo dia vokarina.
Mety nitelina zavatra vahiny koa izy, toy ny ba kiraro, ary ho feno lasantsy ny kibony. Amin'ny tranga marefo kokoa, mety miatrika sakana amin'ny tsinay ianao na fihodinana. Samy mila fitsaboana maika.
Inona no hatao raha maneno ny vavonin'ny alika?
Betsaka ny antony mahatonga ny vavonin'ny alikantsika haneno, raha sanatria tsy mijanona ny tabataba ary mifanohitra amin'izay dia mihabe sy mitohy hatrany izy, ny zavatra tsara tokony hatao dia ny manatona vet.
Alohan'izany dia azonao atao ny manilika, araka ny efa nolazainay teo aloha, fa tsy nihinana zavatra tsy nety aho, ankoatry ny hanoanana na sakafo tsy ampy.
Inona no tsara ho an'ny vavonin-tsofina?
Raha mbola tsy nanome sakafo ny alikanao ianao, manome ny anjara sakafo mifanaraka amin'izany ary ireo dia hihena kely. Omeo rano izy ary raha tsy mijanona izy ireo na aseho soritr'aretina hafa, toy ny fanaintainana, fivontosan'ny kibo, mandoa na fivalanana dia tokony horaisina amin'ny fifampidinihana.
Mahazatra ny mamoaka ny tsinay rehefa mandevina?
Marina izany, iray amin'ireo antony lehibe mahatonga ny tabataban'ny vavoniny ny rehefa alika mandevon-kanina ary na dia matetika aza dia tsy dia miharihary loatra ny maheno azy ireo, zavatra voajanahary be io.
Fikororohana kibo, aretina mampidi-doza
Ny fanodikodinana ny vavonin'ilay alika dia toe-javatra marefo, izay mety hahatonga ny vavony haneno nefa koa mety hiteraka olana maro sy tena matotra izany. Miseho amin'ny soritr'aretina manaraka ity:
Kibo mivonto sy mafy.
Fanaintainana rehefa mikasika ilay faritra.
Fiezahana handoa nefa tsy mahomby.
Tsy afaka mivoaka ny alika ny alika.
Toetran'ny fanahiana sy tsy fitoniana.
Mety misy ny tsy fahalavorariana sy ny tsy firaikana.
Lela sy siligaoma maloto.
Raha manahy ianao fa maneno ny vavonin'ny alika, aza misalasala manamarina amin'ny mpitsabo anao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » aretina » Inona no tokony hataontsika raha maneno be ny vavonin'ny alika?
English Springer Spaniel, alika tena falifaly